Ebe ezumike kacha mma na Colorado! - ULLER
TODAY 2X1 N’EGO - CODE: 2X1YA
Chọpụta ahụmahụ nke ịgba ọsọ n'elu ugwu nke Colorado!
Iche echiche banyere Colorado bụ iche maka ịgba ọsọ, ịgba ọsọ na ndị ọzọ! Na dị ka? Ugwu ya nwere ọkwá dị egwu na ọkwa dị iche iche dị ịtụnanya, ọ dịkwa ndị hụrụ skị, snowboarding na egwuregwu ndị ọzọ snow chọrọ.
Mia osote ya na oke osotinye ikuku ọhụrụ sọọ na Colorado ọ bụ mmetụta dị ịtụnanya. Ọ ghọọla ahụmahụ nke ọtụtụ puku ndị njem na ndị egwuregwu na-eleta ya kwa afọ iji nwee mmetụta adrenaline na-enweghị atụ. Ọnụ ya, nke kachasị elu na Rocky Mountains, bụ otu ihe ahụ na njem, nke onye ọ bụla na-egwu mmiri kwesịrị inwe. You dị njikere ịmụtakwu banyere ebe a na-egwu mmiri? Gụo ma chọpụta etu ahụmere ịgba ọsọ na ebe ezumike Colorado dị!
Chọpụta ebe kachasị mma SKI dị na COLORADO!
Gịnị bụ Aspen?
Aspen bụ obodo dị na Pitkin County na steeti America nke Colorado, nke pụtara dị ka mecca nke ski mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị mgbe thelọ Ọrụ Skiing Aspen malitere. Kemgbe ọtụtụ afọ, obodo a ghọrọ ebe dị ezigbo mkpa maka egwuregwu na omume ọdịnala nke metụtara ski, yana egwuregwu ndị ọzọ snow dị ka snowboarding.
Kedu ihe dị ka Aspen?
Obodo Aspen nwere ebe ntụrụndụ anọ dị na ya, ọ bụ ezie na ha ejikọtaghị ya, mejupụtara obodo ahụ dum ma mee ka ọ bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma maka ịgba ọsọ, n'agbanyeghị ọkwa ị nwere. Onweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na mmefu ego gị abụghị nke kachasị elu, ọ ga-adabere na etiti ski ị họọrọ ịga, yana oge ị na-aga. Onwere ihe diri onye obula n’obodo a!
Ndị na-amalite njem ga - ahụrịrị ebe ha ga - anọ nke ọma na ọdụ ‘Buttermilk’ na mpaghara dị ala nke ọdụ ‘Snowmass’. Ndị nwere ọkwa etiti ịgba ọsọ na-aga nke ọma ịga 'Highlands' na 'Snowmass' na mpaghara ha kachasị elu. Mana ọ bụrụ na ibụlarị onye ọkachamara ọkachamara na ọkwa dị elu, anyị na-akwado ka ịhọrọ Ugwu AspenYounweghị ike ịgafe nnukwu efere ahụ site na ọdụ 'Highlands' n'agbanyeghị. Mana anyị ga-ekwu maka ihe a niile n'uju ma emesịa!
B WITHP WITHTA ANY US Kachasị mma ọdụ na ASPEN!
Ugwu Aspen (Ajax)
Na Ugwu Aspen ọ bụ obodo izizi izizi n’obodo a! Anyị chọtara yaemi odude ke edem edere obio, na e ji ya na inye egwu nke oke ike maka ọkachamara kachasị. N'ezie, Ugwu Aspen Ọ bụ ebe a na-eme ski nke na-enweghị mkpọda maka ndị mbido. O nwere otutu mkpọda nke etiti, ọkwa dị elu na ọkachamara naanị, yabụ mecha bụrụ ebe a na-ekewaghị ekewa n'echiche a. Ugwu Aspen nwere ngụkọta nke egwu 76 jikọrọ ha na-eweli, na ntọala ya dị nnọọ nso na obodo n'onwe ya. An ịtụnanya ojii nwalee nkà gị na nka!
La Ebe a na-eme buttermilkN'aka nke ọzọ, ọ na-enye nnukwu ugwu na-acha anụnụ anụnụ na nke na-acha uhie uhie, nke ahụ bụ ịsị "dị mfe" na "etiti", ọkachasị atụ aro ịmalite gị n'ụwa ịgba ọsọ, tinye nka gị n'ọrụ yana ịnụ ụtọ adrenaline niile nke ọkpọkọ(cheat tubes) na ndagwurugwu (ogige ntụrụndụ snow). Nhazi ya na mmegharị ya na-eme ka ọ bụrụ ebe a maara nke ọma, nwere nhọrọ maka ndị okenye na ụmụaka. Na Ebe a na-eme buttermilk Anyị na-ahụ na ọ dị n’ebe ugwu nke Aspen Highlands, ọ dịkwa obere dị elu. Ọ dị mma maka njem ezinụlọ, ị gaghị echefu ya!
Aspen - Ugwu di elu
Dịrị na Highland Peak na Loge Peak (n'ebe ugwu nke obodo), Ugwu Aspen Ọ na-apụta maka ịnye ugwu dị elu na-acha uhie uhie na nke ojii (akwadoghị maka ndị etiti ma ọ bụ ndị mbido). Ndị na-agba ịnyịnya na-ele ya anya nke ọma iji gbaghaa ugwu ya na ọkwá a na-emegharị maka egwuregwu ahụ, gụnyere Highland Bowl, Olympic Bowl na Steeplechase. Ọ bụrụ na ahụmịhe gabigara ókè bụ ihe gị, nke a doro anya na ọ bụ ebe kachasị mma maka gị!
Apen - Ahịrị
Ebe ezumike a, unke dị nso na Obodo Snowmass, Ọ bụ nke kachasị n’obodo a, o doro anya na ọ bụ otu n’ime ndị kasị ewu ewu na Aspen niile. O nwere otutu uzo egwu di egwu banyere agba nile. Nke a na-eme ka ọ a super jụụ skai iran maka ụdị nile nke ski, ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido ma ọ bụ na-eleta ndị ọrụ ibe na ezinụlọ. Agbanyeghị, ị na-ahụkwa mkpọda ugwu dị elu nke na-ewetara ndị ọkachamara ama ama ama kachasị ihe ịma aka. Na ebe snowmass Ọ na-enye ezigbo ikuku ikuku, nhọrọ nnabata magburu onwe ya, ụlọ nri na ụlọ ahịa ịzụta. O nwere ihe niile!
Aspen Ezubere ya iji mepụta ahụmịhe zuru oke na nke pụrụ iche na gburugburu ski, nke bụ isi ndị njem nleta ya. N’ezie, ịgba ski dị ebe niile! Na mgbakwunye, ọ bụ ntụpọ nwere ọdụ maka ọdụ maka mkpa niile nke ndị ọbịa ya yana ihe kpatara njem ha (njem, ezinụlọ, mmekọrịta ịhụnanya ma ọ bụ mmụta). Obi abụọ adịghị ya, ị nwere ike ịga na ọdụ ụgbọ mmiri ya niile, ọ bụ ezie na ị ga-amaworị nke kachasị dabara gị na ndị ibe gị! Eziokwu bụ, Aspen dị mma ma ọ bụrụ na ị kpebie ịga njem ski na mba ọzọ na oge ezumike gị ọzọ. Gaa maka ya!
Na ọla kọpa ugwu ojii, nke dị na ọdịda anyanwụ nke Denver (isi obodo Colorado), Ọnọdụ dị mma na-echere gị ebe ndị njem nleta na ndị obodo na-enwe ọ multipleụ n'ọtụtụ ihe na snow na mgbakwunye nke ski, nke enwere ike ịme ya n'ọtụtụ egwu nke agba na ọkwa niile. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ 77 dị mfe, 50 etiti na egwu 25 siri ike maka mkpokọta egwu 152 na mkpofu gị. Ọ bụ ndị ọkachamara n'egwuregwu ahụ na-achọ ọkwá ha nke ukwuu, a kpụrụ ha n'etiti ugwu n'ụzọ nkịtị, ma gbanwee maka ọmentụ. nke ski, nwere ọtụtụ egwu dịịrị ha, ma ndị azọrọ ma nke a na-achọghị.
Ebe ọ bụ na ọ dị ihe dị ka kilomita asatọ site na Frisco (na Summit County), ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ebe obibi na obodo a dị nso. You na-ezube ibelata mmefu ego gị n'oge njem gị. Frisco nwekwara ọtụtụ nhọrọ maka njem nlegharị anya nke gụnyere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ebe a na-eme njem na ogige ntụrụndụ snow, yabụ n'oge na-adịghị anya ị ga-agwụ ike. Otú ọ dị, Ogige Ugwu ọla kọpa O nwere ụlọ ọrụ ntụrụndụ ya, ebe obibi na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ thatụ nke ga-ahapụ gị karịa ihe ijuanya, kesaa na ebe atọ: East Village, The Village na Copper na West Village.
Cheta iburu n'uche na ogo nke ọdụ a dị ihe dịka mita 3.000, yabụ ị kwesịrị ịkwadebe iji chee nke a ma ghara ikwe ka ọ wepụ ihe ọchị nke njem gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido.
La Ebe ezumike Winter Park Resort, "Colorado na-ahụkarị" bụ gbakwasara tumadi maka usoro ịgba ọsọ skiing dị elu na nke etiti, ọ bụ ezie na ọ na-enye nhọrọ ụzọ dị mfe maka ndị mbido. A na-edebe Oghere Ubi n'akụkụ akụkụ nke ala nke na-enye gị ohere ịnweta na ịnabata oke ifufe oyi site na ihe niile dị n'ihu ya. Kedu ihe nke a pụtara? Na ha ga-atọ ọnya ebe ahụ ma tinyekwuo akwa oyi akwa iji nwee ọ enjoyụ na mkpọda.
Ọdụ ụgbọ, gịdị nso na nso ihu (ihe dị ka 90 nkeji si Denver), ọ nwere elu atọ (Winter Park, Mary Jane na Vasquez Ridge) na-ekwurịta okwu ma jikọta ibe ha site na ụzọ ụkwụ na mbuli elu, nwere ike ịnata karịa mmadụ 10.000 kwa ụbọchị ski. O nwekwara otutu ebe obibi dika ulo ugwu, ulo oriri, na ulo ndi ozo nke sitere na ndi di ala rue ndi dara oke. Ekwela ka o juru gị anya ma ọ bụrụ na ịchọta ụlọ na ime ụlọ zoro n'ime ọhịa nke ogbe ndịdaOgige Ugbo!
Tụkwasị na nke a, dị ka ihe bara uru, a na-emegharị ọdụ ahụ iji nabata ndị nwere ụdị nkwarụ ọ bụla, ndị nwere ohere ịmụ ski na snowboarding na National Sports Center for People with Disabilities (NSCD).
VAIL (AKW VKWỌ SKI RESORTS)
La Ebe ọdụ ụgbọ mmiri Vail Ski Ọ bụ ya bụ ndị kasị ukwuu na dum ala nke Colorado na nke atọ kachasị na United States dum. Anyị hụrụ na ọ dị n'akụkụ obodo Vail, n'ime Obodo Eagle. Ọ bụrụ n’ikpebie ịga leta ebe a na-egwu mmiri, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-abụrịrị otu n'ime ahụmahụ ịtụnanya kachasị ịtụnanya ị nwere ike ịhọrọ. Ọ na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị na ngalaba ya atọ: Front-Side, Blue Sky Basin, na Black Bowls. Stationlọ ọrụ ahụ nwere egwu maka ọkwa dị elu maka ọtụtụ akụkụ, yana ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọkachamara na-aga eleta ya, mana ọ na-enye nhọrọ dị mma maka ndị na-agba ọsọ na ndị mbido na-agaghị emechu gị ihu ma ọ bụrụ na ha bụ ụdị mkpọda.
Na mgbakwunye, ọ bụ ọdụ nwere obodo na obodo dị na ndagwurugwu Vail nwere ụdị ọmarịcha colonial ị ga - ejide n'aka. To ga - ahụ na njem ịzụ ahịa na ndụ abalị na - adị oke mma! Ihe kachasị mma bụ na ịchọta ọtụtụ narị ebe obibi, gụnyere ụlọ ezumike, họtel, ụlọ, ụlọ na ụlọ obibi, nke ga-adaba na mmefu ego niile na uto ya n'ihi ọtụtụ nhọrọ ya, n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ogige ski kasị dị oke ọnụ Colorado. Yabụ ọ bụrụ na inwere ohere itinye ego ma nwee ọ thisụ na ahụmịhe snow a, mgbe ahụ ị gaghị akwa ụta. Ọ bụrụ na ị na-na a mmefu ego amachi, ihe kachasị mma ị ga-eme bụ ịnọ n’obodo ndị dị nso n’ebe ọdụ ụgbọ ahụ dị, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita ole na ole.
You maara na laA wuru Vail Town n'onwe ya mgbe emepere ski na 1962? Ọ bụ ya mere obodo ahụ ji elekwasị anya na njem nlegharị anya na ndị na-agba ọsọ na-eleta ha. Ke adianade do, Ebe ezumike Ski Ọ bụ ụlọ ọrụ 3 ndị ọzọ dị oke mma, ọ bụ ezie na a na-ewere ha dị ka ndị nwere onwe ha, ụlọ ọrụ Vail Resorts na-arụ ọrụ. Lee, anyị hapụrụ gị ntakịrị ozi gbasara ha!
AKW .KWỌ AB CR. AHA AHA
El Ebe obibi Beaver Creek Anyị hụrụ na ọ dịkarịa ala minit 20 site na Vail, dị nso na obodo Avon. Nke a ojii bụ synonymous na okomoko n'ụzọ ọ bụla, na anyị na-ahụ ya gosipụtara na ya ika na-echekwa, ya art veranda na ị na-ahụ gafee mgbe ị na-eje ije, ye ke ofụri ofụri ikuku nke ebe. Nke a na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị ọzọ dara oké ọnụ, mara na nanị uzo ozo.
Ebe a na-eme ski dị obere ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ebe ntụrụndụ ndị ọzọ dị nso, mana ọ nweghị nkasi obi ma saa mbara maka nke ahụ. N'ezie, ọ nwere ugwu ski nke mejupụtara obodo atọ dị iche iche. Buru n'uche na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke egwu ọ na-enye bụ maka etiti etoju, ọ bụ ezie na ọ na-enye ndị magburu onwe nhọrọ maka elu na mbido etoju. Na ị gaghị echefu ya ịrịba ice iji atụrụ rink nke bụ phenomenal!
A na-akpọkarị ọdụ ụgbọ mmiri Breckenride dị ka "Breck" ma mejupụta ọnụ ọnụ 5 nke gbasara mpaghara Summit niile na Summit County. Ọ bụ otu n'ime ebe ezumike kachasị nleta na United States kwa afọ. Ma ọ bụ na ahụmịhe na Breckenridge na-enye ezigbo ebe ma ọ bụrụ na nke gị bụ obodo mara mma, yana ebe obibi ndị ọzọ maka ihe masịrị gị na mmefu ego niile.
Ọ bụ mbara igwe snow nke nwere oke mgbada maka ọkachamara, ọkwa dị elu na etiti, ọ bụ ezie na ị na-ahụkwa mkpọda maka ndị mbido na ụlọ akwụkwọ ski iji mụta. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịnụ ụtọ ogige ntụrụndụ ụdị-free n'ihi na ihe ọzọ adventurous, na igbe na rails ka slide ma na-awụlikwa elu na zuru trotul, na nke ị pụrụ ọbụna na-agba n'ime a ghọtara ọkachamara eme maka ha ọzọ mpi.
A na-ahụ ebe ezumike a dị egwu na obodo Keystone na steeti Colorado, nke dị nso na Denver. Ebe etiti ya nwere ugwu 3 dị mma maka ịgba ọsọ, ọkachasị na mkpọda maka ọkwa dị elu na ndị ọkachamara, n'agbanyeghị na ọ na-enyekwa nhọrọ maka etiti na ọkwa mbido. Na Isi akụrụngwa ọ kacha atọ ụtọ ileta ma ehihie na abalị maka ama ya Abalị Ski (ịgba ọsọ n'abalị), n'ihi na ụfọdụ ugwu ya kachasị mma na-arụ ọrụ pụrụ iche maka ịgba n'abalị. Ọ dị oke mma!
Na Keystone Resort, find na-ahụkwa nhọrọ dị ịtụnanya gbasara ụlọ nri na ụlọ ahịa maka ppingzụ ahịa, yana ọtụtụ puku ebe obibi na nhọrọ obibi nke ga-adaba na mmasị gị na mmefu ego gị. Nweta site na nke kachasị mma ma dịkwa ọnụ ala, gaa na nnukwu ụlọ ndị oke ọnụ na ugwu.
Ọzọkwa, nke a ski ezumike na Colorado awade ebe maka ịnya anyịnya, ogige igwe kwụ otu ebe, klaasị golf na oghere emegharị iji nye ọgbakọ. O nwekwara ọdọ dị nso ọ dị naanị nkeji ole na ole, nke mgbe oyi kpọnwụrụ ga-aghọ ebe a na-agba ice. Gaghị echefu ha!
Makwaara dị ka "The bezin 'ma ọ bụ nanị" A-bezin ", na Arapahoe Basin ski Resort emi odude ke White River National Forest ke Colorado. Ọ bụ ntụpọ emere maka ọkachasị ọkachamara na ịgba ọsọ na snowboarding, n'ihi na ọtụtụ n'ime ya na-enye ugwu dị elu dị elu. Agbanyeghị, na ebe ezumike ị hụrụ nhọrọ piste nke etiti yana ọkwa dị mfe maka ndị mbido na ndị mmụta, ndị na-achọtakarị ụlọ akwụkwọ ski.
Otu n’ime ihe ndị ị kacha hụ n’anya maka ebe izu mmiri Basin bụ na ị nwere ike ịgba ọsọ ruo mgbe mbido ọnwa Juun, nke nwedịrị ike ịdịgide ruo Julaị ruo afọ ụfọdụ. Ọ bụ ya mere n'ọtụtụ oge, ọ na-emepe ụzọ ya ọnwa atọ karịa ọdụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ileta ya na njem njem ski ọzọ gị, buru n’uche na ọ nweghị ebe obibi nke ya, ị ga-anọrịrị na Keystone Resort ma ọ bụ nọrọ n’ụlọ ndị dị nso n’obodo ahụ ihe dị ka nkeji iri abụọ site na mpaghara ski, dịka Frisco, Silverthorne, Breckenridge na Dillon.
La ebe obibi loveland ị nọ nso obodo Georgetown na Colorado, nke mebere ndagwurugwu Loveland na Basin Loveland nke abụọ ha na-ejikọ onwe ha naanị otu ụgbọ ala bus pụọ. Na agba Ihe kachasị njọ bụ ndị na-eleta Loveland kachasị maka ụzọ 400 `` nke snow na-enweghị okporo ụzọ na mkpọda ugwu ya nke na-asọba n'ọkwá (efere) emeghe. Nke a ga - abụ ọtụtụ snoo karịa ị nwere ike ịchọta n’ebe ntụrụndụ ndị ọzọ dị na Colorado.
Na agbanyeghị nke a, ndị na-agba ọsọ na-ahụ ụzọ Landhụnanya Optionsfọdụ nhọrọ ndị dị mma, na-na mkpọda, ma obere nkpoda, karịsịa na mpaghara Ndagwurugwu Loveland. Nke a bụ otu n'ime ọdụ mbụ iji meghee ọnụ ụzọ ha n'afọ, n'ihi na ha na-enye oge a na-aga site na Ọktọba ruo Mee.
N'obodo a, ị ga-ahụ ụzọ ebe obibi dị iche iche dị iche iche, yana nhọrọ nke ụlọ oriri na ọ andụ condụ ndị dị mfe na ụlọ obibi ndị dara oke ọnụ na-emegharị maka nkasi obi niile. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhọrọ ịchọta ezigbo ebe obibi na obodo Georgetown n'onwe ya.
EGO: Oge ski dị n'etiti ọnwa Nọvemba na Eprel, nke bụ ọnwa kachasị mma iji gaa ebe ntụrụndụ na Colorado. Buru n'uche na ịgba ọsọ bụ egwuregwu dị egwu na ị ga-emerịrị ihe nchekwa niile dị mkpa.
Dị ka anyị kwurula na mbido blog a, ma ebe ntụrụndụ Arapahoe Barin na Loveland bụ ndị abụọ na-emeghe karịa oge ndị ọzọ n'afọ, ọ bụ ezie na eziokwu bụ na mana oghere na mmechi nke oge ski mgbe niile Ọ ga-adabere na ikike nke ọdụ ọ bụla dị ka ọnọdụ ihu igwe. Ọtụtụ mgbe, a na-eme mkpebi ha nke ọma dabere na ogo na ogo snow dara afọ ahụ.
Kedu ihe ndị ọzọ a ga-eme na COLORADO?
Obodo a mara mma, juputara na ihe omume ntụrụndụ nke ga-agbakwunye njem njem gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na gị na ndị enyi na ezinụlọ gị agaa. Can nwere ike iji ohere nke njem ahụ nwee ihe ndị ọzọ ma zuru ike gị ruo nwa oge mgbe ị gachara ọtụtụ adrenaline na snow.
Jiri ohere ndị ọzọ mee ihe na obodo Denver na steeti Colorado n'ozuzu. Offọdụ n'ime ọrụ kacha mma bụ:
Bike na-agba ịnyịnya
Ndị Denver Zoo
Denver Museum nke Science na Nature
Smomobile awat ke obot
Akpụrụ akpụrụ mmiri na osimiri ndị jụrụ ajụ
Kayaking na Confluence Park
Pedal ụgbọ mmiri Washington Park
Mpaghara RiNo ART
Pubs na ụlọ nri
Nzukọ egwuregwu nke otu ndị obodo
A ski njem na Colorado na-ekwe nkwa kacha fun, nnwere onwe na adrenaline!
A na-akpọ Centennial State, n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke United States, nwere ike ịnwe nnukwu ọkụ ọkụ n'ihi ịdị elu ya na ọnọdụ ihu igwe, mana n'etiti ọnwa Nọvemba ruo Eprel ọ na-enweta ọtụtụ puku ndị na-agba ọsọ na-achọ njem na oge ya dị iche iche. na ebe nkiri snow.
Cheta na ị ga - eme njem ị na - eme ski, ị ga - adị njikere oge niile maka obere okpomọkụ na ngwa dị mkpa na na akwa kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ nwe ya ma ọ gbaziri na ọdụ. Tụkwasị na nke a, a ghaghị iburu n'uche na egwuregwu ndị dị egwu na snow na-ebute ihe ize ndụ iji tụlee. Ọ dị mkpa ka a mara nke ọma, kwadebe ma debekwa ọnọdụ ịmụrụ anya nke ọma.
Ugbu a ị matara ntakịrị ihe banyere ahụmịhe ị na-eme skiing na Colorado, ị nwere ike ịhọrọ oge kachasị mma na ebe ịchọrọ maka mkpa gị. Ya mere egbula oge ọ bụla ma nweta njem njem a maka onwe gị!
Gbanye ugogbe anya dị mkpa mgbe anyị na-eme egwuregwu a n'ụdị ya ọ bụla. Nọgide na-agụ iji mara usoro kachasị mma
Ijiri ihe mkpuchi dị mma dị mkpa mgbe ị na-eme egwuregwu dị egwu n'oge snow. Do chere na ị dịla njikere imeri ihe egwu nke okike mgbe ị na-agba ski? Chọpụta 5
Chọpụta asọmpi egwuregwu kacha mma kachasị mma na ihe omume na Europe na ụwa! Onwere otutu ezute zutere n’ụwa, site na nke kacha sie ike na nke kacha ruo na mbụ, ruo na nke kachasị mma,